Jery taratra… herinandro : Hadino tanteraka ny fiainam-bahoaka | NewsMada
Jery taratra… herinandro : Hadino tanteraka ny fiainam-bahoaka
Be ny fanehoam-pijery momba ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana ataon’ny fitondrana. Ankoatra ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fiheverana ny vahoaka ho bado, mahabe resaka ny fifangaroan’ny asam-panjakana amin’ny raharahan’antoka. Ao anatin’izany ny volam-panjakana, olom-panjakana, fitaovam-panjakana…
Mihenjan-droa, telo… ny raharaha fitoraham-bato ny fiara mandalo ao Brickaville amin’ny RN 2. Mitaky ny hamerenana ireo nohafahana vonjimaika amin’izany ny mpitatitra, nanao hetsika fitokonana iray andro. Nilaza ny tsy tokony hamotsorana ireo meloka ny mpitandro filaminana, raha niteny fa tsy nahita porofo ny fitsarana.
Iza no mandainga na tsy manao ny asany? Voalaza fa efa niravona sy nilamina ny raharaha (?), taorian’ny fihaonan’ireo mpitatitra tamin’ny filohan’ny Antenimierandoholona. Tsy hisy intsony ve izany ny mpitora-bato? Voatora-bato kosa ny mpitondra, raha ny fanambaran’ny FFKM: mila fiovam-penitra mahery vaika ny fitantanana.
Nambaran’ireo fiangonana fa fitaka sy lainga no iainana, ka very fanahy ny vahoaka. Manahy krizy amin’ny fifidianana ny Seces, ary efa misy ny antoko na mpanao politika milaza fa hisy krizy amin’ny 2018 noho ny ataon’ny fitondrana: fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana, atao tian-kano tsy tian-kano ny lalàm-pifidianana…
Nambaran’ny governemanta sy ny OMS fa nifarana ny fihanaky ny pesta: 2 384 ireo voa, 202 ireo maty. Na izany aza, mitohy ny ady amin’izany, indrindra amin’ireo faritra fantatra fa itrangany saika isan-taona. Nampitandrina ireo teratany frantsay kosa ny masoivoho frantsay eto an-toerana ny amin’izay mbola fisian’ny aretina izay.
Mampitaraina ny rehetra ny tsy fandriampahalemana, mirongatra indray ny karazana fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Mampitampim-bava ny fidangan’ny vidim-pianana, indrindra ny vidim-bary: tafakatra 2 500 Ar ny kilao ary 700 Ar ny kapoaka. Mandra-pahoviana vao tena misy ny fijerena tokoa ny fiainam-bahoaka? Hadino tanteraka…